Xaar Roob ku Da,ay Xambaar, Xaalaka Diirane Weeye – Rasaasa News
Oct 14, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada, ONLF
Jwxo-shiil: Hannad hadii aad tahay iyo nin raga oo hadaf fog dhawraaya, hogob kuma rideen geesigii hawsha kuu diray, hunguuf nacas ah doqon aan wax helin oo hawd galaad tahay, hogga qodo habaas lagu rogyow mawd hortii baan ku helayaaye.
Siddii aanu horeba idiinku soo tabinay, waxaa Tuulo Swisserland ku taal isku arkay, laba koox oo ka mid ah afartii koox ee ay u kala go,day kooxdii Jwxo-shiil. Afartan koox ayaa waxaa madax u ahaa Jwxo-shiil, oo ay baryihii ugu dambaysay arini afka ku kala qaaday, ka dib kolkii ay cadaatay in uusan wadin wax dan u ah halganka iyo ummada, isaga oo laayey N/hurayaal qaali ah oo ka tirsanaa Jabhadaha Jxsg iyo Jwxo oo iyagu u dagaalama xornimada ummada Somalida Ogadeeniya.
Xiligaa wixii ka dambeyey waxay ummadu go,aansatay in ay u aqoonsato Jwxo-shiil dambiile galay khayaano halgan, oo aan wadin dan guud ee wada qabyaalada iyo burburin halgan, go,aankaas dadweynaha ka dib, waxaa Jwxo-shiil soo foodsaartay cidhiidhi, dhaqaale iyo cabsi joogto ah. Intaa waxaa u dheer isaga oo uu si xun u dharbaaxay cudurka dhiig karka oo ku dhuftay dhinaca midig [high blood pressure], sidaas daraadeed ayaa waxaa uu jeclaan lahaa cid uu ku reebo magac xumo.
Hadaba sidda aanu ku helay warar hoose waxaa soo baxaysa in Jwxo-shiil, oo ay hayso caafimaad xumo iyo cabsi uu cadeeyey in uusan awoodin in uu horjooge u ahaado kooxda Jwxo-shiil. Jwxo-shiil oo ay kulan hoose galeen isaga iyo laba tuke oo ay tuuryo ku filan tahay, ayaa waxaa uu ku baryootamay in ay ka wareejiyaan horjoogenimada iyada oo aan cid kale loo yeedhin si suuqmadow ah.
Waxaa iyagu arintan ka soo horjeeda Ina Dhuubo iyo Qaaxo oo ku go,doonsan Australia, waxayna iyagu jeclaan lahaayeen in kulan balaadhan la isugu yimaado, kaas oo aan suurto gal noqon karin waayo ma jiraan dadweyne xiisaynaya kulan iyo in ay arkaan Jwxo-shiil midna.
Jwxo-shiil, waxaa uu doonayaa in si jujuub ah sidii nin wax haysta oo kale uu horjoogenimada ugu wareejiyo Macalin Diirane, Jwxo-shiil waxaa uu jecelaan lahaa ruux uu kaga siibto horjoogenimada, taas oo uu ka heli karo oo kaliya Macalin Diirane oo isagu aad uga dambeeya xaga fahamka xubnaha kooxda, waxbana aan kala soconin wax la,aanta iyo xaalada xun ee haysata Jwxo-shiil, waa meesha ay Somalidu ka tidhaahdo “xaar roob ku da,ay yaa xambaari kara”.
Todoba sano ka hore ayaa waxaa Jwxo-shiil laga waayey halganku wuu burburayaa, adiga ayaana burburinayo ee sharciga raac oo ka da,aa dhibaatada aad ku wado, waa laga quustay wuxuuna jeclaystay in uu ku xoogsado. Hada waxaa dhamaaday waxa alaale wixii nah ahaa ee ay Jwxo lahayd, dhaqaale dambe oo ka soo gali Jwxo-shiil ma jiraan, sidaasi daraadeed waa in aan ku wareejiyaa ku wax moodi hada.
Maanta Macalinku waxaa uu taagan yahay sheekadii Coomaadiga ee lafta cad la cararay, waxaanse odhan lahaa ceeb iyo dambi uu ruux kale lee yahay adigu ha qaadan, magac xumana jabada aad ka soo jeedo ha u soo jiidin.